America Inoti Kunyangwe Paine Kunetsana neVakuru veHurumende Icharamba Ichibatsira Vanhu vemuZimbabwe
Gumiguru 12, 2021
Mumiriri weAmerica muZimbabwe anoti kunyangwe paine kunetsana pakati penyika mbiri idzi munyaya dzezvematngwero enyika, America iri kuenderera mberi nekuita zvirongwa zvekubatsira vana veZimbabwe munyaya dzezvehutano nezvimwe.
Rumwe rubatsiro rwuri kuitwa neAmerica ichishanda nekanzuru yeHarare iri kuona mari kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica yePresident Plan for Aids Relief (Pepfar). Homwe iyi yakanangana nekubatsira vanorarama nechirwere cheHIV/AIDS.
Vachitaura mushure mekushanyira imwe kirinika yekanzuru iri kuDzivarasekwa yeRujeko iyo iri kubatsirwa pasi pechirongwa chePepfar, vakafanobata chigaro chemumiriiri weAmerica muZimbabwe, VaThomas Hastings vatiwo kunyangwe hazvo hukama hweZimbabwe neAmerica husina kumira zvakanaka, vati nyika mbiri idzi dzirikushanda zvakanaka kunezvehutano senzira yekusimudzira hupenyu hweveruzhinji.
Vanga vakamiririra mukuru wezvehutano muguta reHarare, Dr Michael Vere vati rubatsiro urwu rwabatsira vakawanda munyika.
Kirinika yeRujeko inobatsira vagari vanodarika zviuru makumi masere nezvisere nemazana maviri nemakumi manomwe neumwe vanobva munzvimbo dzinogara vazhinji dzakaita seDzivarasekwa nedzimwe.
VaVere vatiwo pasi pechirongwa ichi, America iri kubatsirawo kanzuru yeHarare, nevamwe vashandi vezvehutano
Vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzevashani mubazi rezvehutano sezvo vari kuchema chema kuti vari kutambiriswa mari shoma.
VaHastings vati vanofara zvakanyanya nekuona kuti rubatsiro rwuri kupiwa nenyika yavo huri kubatsira mukuchengetedza hutano.
Vati pesi pechirongwa chePepfar, Rujeko ndeimwe yemakirinika akawanda avarikubatsira mukuvapa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuongorora hutachiona hweHIV/Aids, kutenga mapiritsi anomwiwa nevanenge vaine hutachiona, kuongorora huwandu hwehutachiona muropa kana kuti viral load, kurwiswa kwechirwere cherurindi kana kuti TB, kushandisa michina yechizvino zvino mukubatsira varwere kana kuti Eletronic Health Record HER nezvimwewo
Pasi pechirongwa chePepfar, America inoti icharamba ichibatsira Zimbabwe kurwisa chiwere cheHIV/AIDS kuburikidza nekupa nyika madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana maviri nematatu achashandiswa mumwedzi gumi nemiviri kusimudzira nyaya dzezvehutano. America inoti kubva muna 2006 patanga chirongwa chePepfar munyika, Zimbabwe yabatsirwa nemadhora ekuAmerica $1.1 bhiriyoni.